My Astro View: ဖုန်းရွှေ ဆိုပါလား
ဗေဒင်ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက် ရေးသားနေခဲ့တာ နှစ်နဲ့ချီကြာနေပြီဆိုပေမယ့် ဖုန်းရွှေပညာရပ်အကြောင်း တစ်လုံးတပါဒမှ မပြောဖြစ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းခဲ့လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ နယ်မြို့လေးမှာ တိုက်အိမ်ကြီးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ တိုက်အိမ်ကြီးက မထူးခြားပါဘူး။ ဟိုးအရင်ခေတ်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ ခပ်တောင့်တောင့် တိုက်ကြီးဖြစ်တာက လွဲရင် ဘာမှ ထူးခြားလှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးခြားတာက တိုက်တည်နေရာပါပဲ။ ဒီတိုက်မျက်နှာစာ ဘက်ဟာ မြန်မာတွေ အခေါ် လှေဦးတိုက်၊ လှည်းဦးတိုက်၊ လမ်းဦးတိုက် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုက်မျက်နှာစာဖက်မှာ လမ်းမရှည်ကြီး တစ်ခု ရှိနေပြီး တိုက်ရှေ့တည့်တည့်ရောက်မှ ဘယ်ညာကို ခွဲထွက် သွားတဲ့ လမ်းနှစ်ခု ကလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ လှေဦး လှည်းဦးမကလို့ မော်တော်ကားပါ ဦးတိုက်လာတော့ အဲဒီတိုက်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီးခမျာ လှော်ရင်းက နစ်သလို လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းကကို မွဲရာက ပြာကျလာလို့ သူပိုင်တဲ့ တိုက်ကြီးကို တခြားသူဌေးတစ်ယောက်ဆီ လက်လွှဲရောင်းချလိုက်ရပါတယ်။ သူနဲ့ သူ့သားသမီးတွေက ဒီလို လှေဦးလှည်းဦးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ ပြန်ဖြေရှင်းသွားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ အယုံအကြည်လည်း ရှိဟန် မတူခဲ့ပါဘူး။ တိုက်ပိုင်ရှင်အသစ် ဖြစ်လာတဲ့ သူဌေးကတော့ လှေဦးလှည်းဦးကို ယုံကြည်သလို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာကိုပါ ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့တယ်လို့ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားနဲ့ ကြားရပါတယ်။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ တိုက်ပိုင်ရှင်အသစ်က အိမ်တက်ပွဲ လုပ်တဲ့နေ့မှာပဲ လှည်းဦးတိုက် ဖြစ်နေတဲ့ သူ့တိုက် အိမ်ရှေ့ မျက်နှာစာမှာ သောက်ရေအိုးစင်တစ်ခုကို ကျကျနန ဆောက်လိုက်ပြီး ဧရာမမှန်ချပ်ကြီး တစ်ခုကိုလည်း ခြံဝန်းမျက်နှာစာ ဘက်မှာ ကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မှန်ချပ်ပေါ်မှာကတော့ လက်ရာကောင်းနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ မာန်ဖီနေတဲ့ ကျားဖြူသဏ္ဍာန်ကို ခပ်ပါးပါးလေး ဆွဲသားထားပါတယ်။
အဲဒီအစီအမံတွေ ပြုလုပ်အပြီး နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ဒီတိုက်အိမ်ပေါ် တက်လာတဲ့ သူဌေးဟာ ပထမသူဌေးလို မွဲပြကျဖို့ နေနေသာ၊ စီးပွားတက်လာလို့ လုပ်ငန်းတွေတောင် တိုးချဲ့ရတယ်လို့ ပြန်ကြားရပါတယ်။
ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ အစီအရင်တွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိလား မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ပထမသူဌေးကြီးဟာ လမ်းဦးတိုက်တာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ သူ့ဖာသာ ကံဇာတာအရ စီးပွားကျကိန်း ကြုံနေလို့ ဒုက္ခရောက် သွားတာလား။ ဒုတိယသူဌေးဟာ အစီအရင်တွေ လုပ်လို့ လမ်းဦးတိုက်တာကို ကျော်ဖြတ်ရင်း စီးပွားတက် သွားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကံအရ တက်ချိန်ရောက်လို့ တက်သွားတာလား။ ဒီပညာတွေကိုမှ စူးနစ်မူးရစ်လေသူ ကျွန်တော့်မှာ မေးခွန်းတွေ အလိုလို ထုတ်မိလျက်သား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
လှေဦးလှည်းဦးလမ်းဦး တိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ထောင့်စွန်းထွက် တိုက်တွေကနေ တခြားအိမ်တွေကို စီးပွားယိမ်းယိုင်စေတာတွေ၊ ခေါင်ချွန်းဆောက်ထားတဲ့ အိမ်တွေက မျက်နှာချင်းဆိုင် အိမ်တွေကို အနိဌ ဖြစ်စေတာတွေ မြင်ရတွေ့ရ ကြုံရ လာတဲ့အခါ တရုတ်ပေါက်ဖော်ကြီးတွေရဲ့ ( မြန်မာသံအခေါ် ) ဖုန်းရွှေဆိုတဲ့ ဂေဟဗေဒပညာရပ်တစ်ခုကို ကျွန်တော် လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗေဒင်ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက် ရေးသားနေခဲ့တာ နှစ်နဲ့ချီကြာနေပြီဆိုပေမယ့် ဖုန်းရွှေပညာရပ်အကြောင်း တစ်လုံးတပါဒမှ မပြောဖြစ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေ့လာမှု အားနည်း ခဲ့လို့ပါပဲ။ ကြုံရာ ဆောင်းပါးတွေ၊ စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်မိပေမယ့် နက္ခတ်ပညာ၊ ဆန်းကျမ်းပညာ တွေလောက် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့တော့ ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းလည်း ချိနဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နေထိုင် ဖြတ်သန်းရာ ဘဝနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့ ကိုယ်သိသလောက် ဖုန်းရွှေပညာလေးနဲ့ လူတွေရဲ့ ဆက်စပ် မှုကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာဖူးသမျှ ဖုန်းရွှေပညာနဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ရေးဖို့ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ဖုန်းရွှေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ကျမ်းနှစ်အုပ် ရထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် ပြန်တင်ပြပေးပါမယ်။ စာအုပ်ထဲက စကားလုံးတွေချည်း ပြန်ပြောပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ဖုန်းရွှေ အကြောင်း ရေးထားတာဆိုလို့ ဘလော့ဂါ ကိုသက်ပိုင်သူ ရေးတဲ့ ဒီဆောင်းပါးတစ်ခုပဲ တွေ့မိပါတယ်။
မြန်မာပိုင်ပညာတစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် သိထားအပ်တဲ့ ပညာတစ်ခုမို့ ကိုယ်သိထား၊ မြင်ထားတာတွေ ရှိရင်လည်း လက်တို့ခဲ့ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ။
ဗဟုသုတ ရစရာတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူး ညီလေးရေ။
yes, when we built, buy the house, we have to check this conditions. it is important.
I found such kind of building. If someone have such kind of conditions, should do what u mentions.
စလုံးမှာတော့ စလုံးတရုတ်တွေက ဖုန်းရွှေကို အရမ်းယုံတာ ... မြန်မာတွေသာ ဒါမျိုးရှိတယ်ထင်တာ... သူတို့က ပိုဆိုးသေးတယ် ... အိမ်ဝယ်တာတို့ ဆိုင်ခန်းဖွင့်တာတို့ဆို ဖုန်းရွှေမပါပဲနဲ့ မပြီးဘူး။
နှစ်နဲ့ချီပြီ တည်ရှိခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေမို့လို့ အစွမ်းသတ္တိရှိ တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။
လှည်းဦးတိုက် ပြဿနာတော့ အကြိမ်ကြိမ် ကြားဖူးပါတယ်။ တတ်သိတဲ့ ပညာရှင်နဲ့ ဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်ရင် ငွေကုန်ကြေးကျ မများဘဲ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေတာမို့ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်မသိ ၊ မတတ်ရင် မယုံဘူး ဆိုပြီး စုံလုံးကန်း အော်နေတာထက် စာရင် ထိုက်သင့်သလို လက်ခံ လေ့လာတာကို သဘောကျပါတယ်။ လောကမှာ မလိုအပ်တဲ့ ပညာ ဆိုရင် သူ့ဖာသာ တိမ်ကော ပျောက်ကွယ်သွားစမြဲပါပဲ။